Ukulungiselela ubusika | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukulungiselela ubusika
Uma ufuna ukumangaza izihlobo zakho nezivakashi ngejamu enomuncu ongavamile futhi inezinto eziningi eziwusizo, khona-ke ukujamana kwe-Manchurian kuhle kakhulu ngesenzakalo sakho. Kuye wonke umuntu uye wezwa ngokudla okunjalo, nakuba iqukethe izithako eziningi zokwelapha eziyingqayizivele namavithamini, okwenza kungabi nje kuphela i-dessert enomnandi, kodwa futhi uhlobo lomuthi.
Indlela yokulondoloza ubusika ebusika: ukuqhwaza
Ummbila ubuhle obuhle kakhulu bobabili abadala nabantwana, kodwa isikhathi sokusetshenziswa kwalesi mkhiqizo sincane kakhulu - ngeshwa, ama-cobbles amancane akakwazanga ukugcina isikhathi eside. Kodwa ungakwazi ukunweba isikhathi sokusetshenziswa kommbila kuze kufike ehlobo elizayo, uma ukwazi ukufaka ummbila ebusika emanzini nasezinhlakeni.
Ukupheka ukupheka ebusika
Abesifazane besifazane nsuku zonke bayamangala umbuzo - ukuthi yini ukupheka isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Njengoba kunesidingo esikhulu sesikhathi, kunezinqubo ezithile ezongezwayo, ngoba kubalulekile ukuthi ukudla kuphekwe ngokushesha, kodwa ngesikhathi esifanayo kuyinambitha, inelisekile futhi inempilo. Ukuthola kwangempela yizinto ezilungiselelwe ezihlukahlukene, lapho ungasheshe upheke khona umndeni wonke.
Ukukhipha i-zucchini ebusika ekhaya
Ukuqhwaza kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuvuna ukudla ebusika, okukuvumela ukuba ugcine izinto eziwusizo kuze kube sezingeni lonke le-vitamin. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa kuyo, kungenzeka ukuthi ulondoloze isikhala ekamelweni, ubeke ukulondolozwa okuncane lapho. Futhi, uzongena isikhathi, umzamo nemali, ngoba inqubo iyashesha futhi ilula, futhi imifino ehlobo ibiza okungenani kakhulu ebusika.
Indlela yokoma ama-eggplant ekhaya
Buluhlaza - kwabaningi, lokhu kungomunye wemifino ethandekayo kakhulu ehlobo. Abasemhlabeni abacabangi ngemenyu yehlobo ngaphandle kweSaute kusuka emaqabungeni kanye nezinye izitsha okumnandi. Ihlobo lihamba ngokushesha, futhi ama-eggplants agcinwa isikhathi eside kangaka! Kodwa ungazama ukulungisa le mifino enhle esikhathini esizayo futhi ujabulele izitsha zobuluhlaza ngenkathi ebandayo.
Ukulondolozwa, ukomisa, ukuqandisa kanye nezinye izindlela zokuvuna i-cherry enhle ebusika
Isikhathi sasehlobo yisikhathi esihle kakhulu: kukhona ukhetho olukhulu lwezithelo namajikijolo ensimini nasemahalafini ezitolo. Kubantu abaningi, uJuni inyanga yabo eyintandokazi, futhi ngoba phakathi nalesi sikhathi ukuvunwa kwama cherry kuvuthwa emithini. Futhi kubonakala sengathi unesikhathi esanele sokudla esihogweni, kodwa konke okufanayo, lapho kuqala isimo sezulu esibanda, uyakhumbula le berry enamahloni ngesizi.
Izindlela zokugoma amathini emakhaya
Phakathi nesikhathi samalungiselelo asebusika, umbuzo wokugonywa kwamathini kuwubucayi kakhulu, ngoba ukuhlanzeka nokuhlanzeka kwezitsha lapho ukulondolozwa kuzogcinwa khona kuyisihluthulelo sokunambitheka kwayo, iphunga nokuphepha kwempilo yabantu. Kungani udinga inzalo yamathini? Okumangalisa ukuthi, kodwa abaningi abanikazi bezindlu abashaya indiva inqubo yamakhansela abilayo, futhi kuyize.
Uma uthanda ama-plums, kodwa awuzange uphephe i-compote kusuka kubo, khona-ke lesi sihloko senu! Kuyo sizokwabelana nawe eziyisithupha ezilula, kodwa ngesikhathi esifanayo zokupheka ezihlwabusayo kakhulu ze-compum plum. Ngaphezu kwalokho, sizokufundisa ukuqaphela kokulungiswa kwalesi siphuzo. Futhi ungakhohlwa ukukutshela ngezinzuzo zayo. Kuyini iplamu ewusizo compote? Izakhiwo eziwusizo okwanele hhayi kuphela izithelo, kodwa futhi for compote, ukukhishwa kubo.
Indlela yokwenza i-apula cider uviniga ekhaya
I-Apple cider uviniga kuluhlu lwemikhiqizo yemvelo enempahla ezuzisayo. Abantu babaqaphela esikhathini esidala. Futhi bachazwe ngokuningiliziwe udokotela we-naturopathic waseMelika D. Jarvis encwadini ethi Honey and Other Natural Products, eyavela ngo-1981. Emsebenzini wakhe, waqoqa zonke izindlela zokupheka ekusebenziseni i-apula cider uviniga emithi yokwelapha, ephikisa ukuthi ukusetshenziswa kwayo kusiza ekuvimbeleni nasekwelapha izifo eziningi.
Gcwalisa kusuka kuma-apricot
I-apricot ingenye yezithelo ezinhle kakhulu, ezivame kakhulu futhi ezihlwabusayo futhi inezici zayo zokulungiselela ebusika. Ngaphezu kokugaya, u-jam no-jam, ama-compotes amahle ahlelwe kuwo, izindlela zokupheka ezisemqoka esizozihlola manje. Iyiphi i-compote ewusizo yama-apricot I-Apricot iqukethe izakhi eziningi eziwusizo namavithamini.
Iresiphi yokulungiselela amameva jam (ngaphandle nangamatshe) nezinzuzo zayo
Abaningi bakholelwa ukuthi ameva nama-drenches ngamagama ahlukile ebhere elifanayo. Eqinisweni, konke kuyiphutha kancane. I-turn is a shrub zasendle, kanti ameva yi-subspecies yamaplamu asekhaya. Ngamanye amazwi, umgqoki uyinhlangano engokwemvelo yamameva asendle nama-plums ahlwanyelwe, okwakugcina ekhudlwana futhi enomnandi kunameva, kodwa ama-plums amancane futhi awesabekayo.
Izindlela zokupheka zezitshalo zeqanda ezihlwabusayo ebusika
Imvelo isinika ukudla okunempilo nokuhlwabusayo. Ngakho, ekupheleni kwama-eggplants ehlobo noma "ama-blue" avuthwe emibhedeni, njengoba bebizwa ngabantu abavamile. Nakuba le mifino inombala obomvu ngaphezu kombala ohlaza okwesibhakabhaka, ezinye zezilwane zinezimhlophe. Le mifino iyasiza kakhulu futhi inomsoco, ngakho-ke abanikazi bezindlu bazama ukuyilungisa ebusika, ukuze bakwazi ukuzijabulisa kanye nomndeni wabo ngomkhiqizo omnandi.
I-caviar isitshalo seqanda esenziwe ngokwenza: isisindo esilandelayo nesithombe
"I-Caviar ngaphandle kwezwe, isitshalo seqanda!" - Ngakho ngokuziqhenya wanikela lokhu isidlo esiphundu ngokumangalisayo ngomlingisi weSoviet comedy L. Gaidai "Ivan Vasilyevich Izinguquko Profession". Yiqiniso, umkhiqizo onjalo awukwazi ukuqhathaniswa ne-red caviar ebomvu noma emnyama ngamanani noma ngezindawo ezizuzisayo, kodwa nokho kuyisiphuzo esihle, hhayi nje kuphela ngenkathi, ngoba i-caviar eluhlaza okwesibhakabhaka ingahle ilungiswe ngendlela yokushisa ebusika ngaphandle kwezinkinga ezikhethekile.
Indlela yokupheka iplamu jam ebusika
I-autumn yisikhathi esibalulekile sonyaka kumama wendlu ngayinye, ngoba yisikhathi sokulungiselela ukulondolozwa ebusika. Futhi kancane uma kuqhathaniswa netiyi elishisayo nejamu ngobusuku obusika obusika. I-Plum - ikhethelo elihle, ngoba i-jam kusuka kuyo iyinhle kakhulu, futhi ukupheka akulula. Mayelana nezinzuzo zePlum Plum (lat.
Indlela yokuqoqa amapulazi ebusika: 3 zokupheka best
Ama-plums aqoshwe yi-billet ethakazelisayo, enomnandi. Izithelo ezimnandi nezomuncu zeplamu zihlala zithola abalandeli bazo. Njengamanje, kunezindlela zokupheka eziningi zokulungiselela ukugcinwa okunjalo. Cabangela ezinye zazo. Thola ukuthi yiziphi izinzuzo ezingadlulela abesifazane. Yimuphi iplamu engcono ukukhetha Ukukhethwa kungcono ukukhetha izinhlobo ze-plums "isiHungary", "i-Renklod" noma yiziphi ezinye izinhlobo ezinamazinyo.
Indlela yokwenza i-sea buckthorn i-compote: iresi-step-step-step nge izithombe
I-Sea buckthorn ingenye yezitshalo eziwusizo kakhulu ezikhula eYurophu nase-Asia. Ngesikhathi esifanayo, izinzuzo zayo ezingenakunqunywa kufanele zibhekiswe ekuvuneni okuphezulu kakhulu: ngonyaka onobuhle, kuze kube ngu-15 kg wezithelo zingavuna emthini owodwa, noma ngaphezulu! Kusobala ukuthi ukudla amajikijolo amaningi, kungakhathaliseki ukuthi kuyamnandi kangakanani, kunzima kakhulu.
Indlela yokulondoloza ummbila ekhaya
Emashalofini ezitolo zithengiswa ummbila osemathinini emathini. Kuvame ukuthengwa, njengoba kuyisithako kuma saladi amaningi nezinye izitsha. Kodwa okungenalutho kungenziwa wena ekhaya futhi awupheki okusanhlamvu kuphela, kodwa u-cobs wonke. Kungani ummbila osemathinini Uma ummbila ophathwa ngukushisa ungapheli izimfanelo zakhe nokudla okusemathinini okuvela kuwo kuyasiza ngenxa yezindawo ezithile: iqukethe amakhilogremu ambalwa (58 kcal ngamagremu angu-100) futhi izoba usizo ekudleni kwabantu abafuna ukulahlekelwa isisindo; iqukethe amavithamini weqembu B, i-ascorbic acid, i-vitamin A ne-beta-carotene, i-niacin; iqukethe ama-micro - microelements - sodium, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, selenium, manganese, ithusi, insimbi kanye ne-zinc; Izinto eziqukethe izinhlamvu zommbila zinempahla e-antioxidant kanye ne-oncoprotective; iqukethe amino acid, kuhlanganise okubalulekile; akubangeli ukuphola, ngokungafani nokupheka; kuso cishe kungabi nemithi yokudla; ayiqukethe gluten.
Indlela yokupheka i-apricot jam: 3 zokupheka best
Lapho kufika ekwindla, umzimba wethu uqala ukuzwa ukungabi namavithamini namaminerali. Izithelo nemisipha yonyaka isiphelile, futhi okusha ngeke kusheshe. Ngakho-ke, ukuze umzimba wethu uthola izakhi zomzimba kulo nyaka, kubalulekile ukuvuna izithelo ebusika. Ukudla okuthandayo kanye nomuthi omuhle endaweni yethu kusukela esikhathini esidlule sekuyi-apricot jam.
Izindlela zokupheka eziphezulu eziyishumi ze-cherry tincture ezenziwe ngezenzo
I-Cherry tincture iyisiphuzo esisekelwe ebhokisini ngokuphuza utshwala obengeziwe. Kunezindlela zokupheka eziningi zezinhlobonhlobo ze-cherry, kodwa namhlanje sizobukela phezulu 10, sibonakaliso senani lezithako kanye nomhlahlandlela wokupheka ngezinyathelo. Yini i-tincture ewusizo ku-cherry Ukusetshenziswa kwe-tincture ku-cherry kunqunywa ukubunjwa kwayo.
I-Autoclave yokucubungula ukudla
Sekuyisikhathi eside ama-autoclave asetshenziselwa ezindaweni eziningi: imithi, i-cosmetology, nezimboni ezihlukahlukene, kodwa iningi liyaziwa namadivaysi okulondolozwa ekhaya. Njengoba unikezwe ikhwalithi yemikhiqizo ephekwe kuzo, ukuthandwa okunjalo akumangazi. Abaningi banesithakazelo ekuthengeni noma ekwakheni indlela efanayo yokusetshenziswa kwekhaya, ngakho-ke namhlanje sizoxoxa ngezinzuzo nezinkinga zokukhethwa okuthengwe nokwenza ekhaya.